Momba anay - NUEVASA
Brand nandefa ny pragmatika ho avy mandrakizay eny an-dalana
Tamin'ny 2005, Yiwu Yitian teknolojia co., Ltd. dia niorina tao Yiwu, faritanin'i Zhejiang, izay ivon-toeram-pizarana manerantany ho an'ny entana kely. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, Yiwu Leixin trading co., Ltd. natsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2017. Ny orinasa hatramin'ny niorenany, manaraka hatrany ny tsipika marika, miezaka ny manangana ny rafitra mifanaraka amin'ny fahavelomany sy ny fivoarany, manamafy ny fifehezana anatiny, mampitombo ny fenitra serivisy hanatsarana ny serivisy, ary hanana ny fitaovan'ny tànana mpanamboatra e-ten namana siantifika sy teknolojia fahatsapana fahatokisana tena izy atolotry ny fanamorana sy tombony, izany dia hisafidy ireo namana teknolojia mpanamboatra e-ten mpamatsy tanana omen'ny marika sy hasina marika hita.
Taona maro niadiana tamin'ny fikatsahana tsy tapaka ny fandrosoana sy ny tonga lafatra miaraka amin'izay, manamafy hatrany ny orinasan-tsoratry ny finday misy, manitatra mavitrika endrika endrika varotra, hamorona ny orinasa ny mpiasa rehetra sy ny mpanjifanay amin'ny teknolojia e-folo mpanamboatra fitaovana. Ankehitriny dia mifampiraharaha amin'ny fandrosoana tanteraka amin'ny ho avy, mba hanasoavana ny sehatra misokatra, avelao ny mpanamboatra fitaovana-tanana e-folo ny vokatry ny fivoaran'ny siansa sy ny haitao dia afaka manome valiny tsara kokoa amin'ireo sakaizantsika vaovao sy taloha.
Ny vokatra earphone-tsika dia mifanentana tokoa, manarona mihoatra ny 90% ny vokatra niomerika eny an-tsena, ary azo ampiasaina amin'ity fitaovana ity. Voavaha ny teboka fanaintainan'ny indostria, tsy misy feo ankehitriny, tsy mijanona ny fitoniana. Fandidiana tsotra sy fifehezana manan-tsaina.
Ny mozika dia zavakanto tsy manam-petra, misy headphone, lavitra ny tabataban'izao tontolo izao, mangina amin'ny moziko manokana. Tia mozika, tsy manome voninahitra ny kilasika fotsiny, fa koa mitia ny feo madio amin'ny earphone
Ho fanampin'izay, ny fonosana fiarovana anay finday dia voaray tsara hatrany, miaraka amina kalitao avo lenta. Tsy afaka miaro ny telefaona finday fotsiny izy io, fa manana hatsarana ihany koa, ary manakaiky ny olona ny vidiny.